Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fiaraha-miasa matanjaka i Shina sy Afrika miady amin'ny COVID-19
Andrasana ny firoboroboan’ny finamanana Shina-Afrika satria vao mainka mihalalina ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra samihafa taorian’ny fihaonamben’ny minisitra faha-8 an’ny Forum momba ny fiaraha-miasan’i Shina-Afrika (FOCAC) natao tany Dakar, Sénégal.
Nanazava ny tsiambaratelon'ny fisakaizan'i Shina-Afrika sy ny fijerena ny fivoaran'ny fifandraisan'izy ireo amin'ny ho avy izy, nasongadiny ny firaisankina manohitra ny areti-mifindra, ny fanamafisana ny fiaraha-miasa azo ampiharina, ny fampiroboroboana ny fampandrosoana maitso ary ny fiarovana ny rariny sy ny hitsiny.
Fiaraha-miasa amin'ny COVID-19
"Mba hahatongavana amin'ny tanjona napetraky ny Vondrona Afrikana amin'ny fanaovana vaksiny ny 60 isan-jaton'ny mponina Afrikana amin'ny COVID-19 amin'ny 2022, dia hanome vaksiny iray lavitrisa hafa ho an'i Afrika i Shina, ka ny 600 tapitrisa amin'ireo dia homena maimaim-poana," hoy i Xi. .
Nandritra ny fotoan-tsarotra indrindra tamin'ny ady nataon'i Shina tamin'ny valan'aretina COVID-19, nanome fanohanana mafy an'i Shina ireo firenena Afrikana sy ireo fikambanana isam-paritra toa ny Vondrona Afrikanina (UA). Taorian'ny namelezana an'i Afrika ny COVID-19 dia nanome vaksiny COVID-50 ny firenena afrikanina 19 sy ny Vaomiera AU.
"Tsy hohadinoin'i Shina na oviana na oviana ny fisakaizana lalina ananan'ny firenena Afrikana," hoy i Xi, ary nampiany fa hanatanteraka tetikasa ara-pitsaboana sy fahasalamana 10 ho an'ny firenena Afrikana ihany koa i Shina ary handefa mpikambana ao amin'ny ekipa mpitsabo sy manam-pahaizana momba ny fahasalamam-bahoaka 1,500 any Afrika.
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity dia vita ara-drafitra ny tranoben'ny foiben'ny Foibe afrikanina misahana ny fanaraha-maso sy ny fisorohana ny aretina vatsian'ny sinoa.
Fiaraha-miasa azo ampiharina amin’ny sehatra samihafa
Hiara-hiasa amin'i Afrika i Shina hanitatra ny varotra sy ny fampiasam-bola, hizara traikefa amin'ny fanalefahana ny fahantrana, ary hanamafy ny fiaraha-miasa amin'ny toekarena nomerika sy ny angovo azo havaozina, hoy i Xi.
Haniraka manampahaizana momba ny fambolena 500 any Afrika i Shina, hiara-hiasa akaiky amin’ireo firenena afrikanina amin’ny fanatanterahana tetikasa lehibe sivy momba ny fitsaboana, ny fanalefahana ny fahantrana, ny varotra, ny fampiasam-bola, ny fanavaozana nomerika, ny fampandrosoana maitso, ny fampivoarana ny fahaiza-manao, ny fifanakalozana ara-kolontsaina ary ny filaminana, hoy ihany izy.
Hatramin'ny nananganana ny FOCAC, ny orinasa sinoa dia nampiasa vola isan-karazany mba hanampiana ireo firenena afrikanina hanorina sy hanavaozana lalamby maherin'ny 10,000 km, lalambe efa ho 100,000 km, tetezana efa ho 1,000 ary seranana 100, ary tambajotra fampitana herinaratra sy fitsinjarana 66,000 km. ho an'ny taratasy fotsy mitondra ny lohateny hoe “Shina sy Afrika amin'ny vanim-potoana vaovao: Fiaraha-miombon'antoka mitovy” nivoaka tamin'ny zoma.
Manorina fiaraha-monina Shina-Afrika miaraka amin'ny hoavy iombonana
Mankalaza ny faha-65 taona niantombohan’ny fifandraisana ara-diplomatika teo amin’i Sina sy ireo firenena afrikanina tamin’ity taona ity.
Miarahaba ny fanahin'ny fisakaizana sy fiaraha-miasa Shina-Afrika, nilaza i Xi fa taratry ny traikefan'ny roa tonta amin'ny fifampizarana harena sy loza ary loharanon-kery ho an'ny fampandrosoana ny fifandraisan'i Shina-Afrika.
Tao anatin’ny 65 taona izay, nanangana firahalahiana tsy tapaka amin’ny tolona amin’ny imperialisma sy ny fanjanahantany i Shina sy Afrika, ary niroso tamin’ny fiaraha-miasa miavaka amin’ny dia mankany amin’ny fampandrosoana sy ny famelomana indray, hoy izy.
"Niara-nanoratra toko mahafinaritra momba ny fifanampiana isika ao anatin'ny fiovana sarotra, ary manome ohatra mamirapiratra amin'ny fananganana karazana fifandraisana iraisam-pirenena vaovao," hoy izy.
Nametraka ny foto-kevitry ny politikan'i Afrika Shina i Xi: fahatsoram-po, vokatra tena izy, fifankatiavana sy finoana tsara, ary fikatsahana tombontsoa lehibe kokoa sy tombontsoa iombonana.
Tamin'ny fandraisana andraikitra avy amin'ny firenena Shina sy Afrikana, dia notokanana tamin'ny fihaonamben'ny Minisitera voalohany tao Beijing ny FOCAC tamin'ny Oktobra 2000, miaraka amin'ny tanjona hamaliana ireo fanamby mipoitra avy amin'ny fanatontoloana ara-toekarena sy fikatsahana fampandrosoana iombonana.
Manana mpikambana 55 izao ny FOCAC, ahitana an’i Shina, ireo firenena afrikanina 53 manana fifandraisana ara-diplomatika amin’i Shina, ary ny vaomiera AU.